Ifaka Norton Security
Norton Namuhla, ngingathanda ukuba banikezele isihloko lo mkhiqizo like Norton Internet Security, okuyinto omunye izinhlelo enokwethenjelwa kakhulu yokulwa isofthiwe enonya.
Kungani ulahlekile Skype on laptop kanye nendlela ukukulungisa?
Skype Uma esebenzayo Skype umsebenzisi, izinkinga hlelo emsebenzini ungeke ngete.
Kanjani I susa le fayela njengoba csrss
Kanjani I susa ifayela njengoba csrss
Windows Vista beta 2 kulindeleke ngoNovemba
& nbsp Lokhu;
Nginesifo router tp-link, uwuxhumekile
Ngifuna ukuya Internet nge Wi fi efonini, kodwa ifoni ixhunyiwe kulotshiwe, futhi lapho ngiya Internet, Google, ukudlala emakethe, njll kulotshiwe ukuthi akukho kuhlobana ukuze wenze technikawater Hlola izilungiselelo router, kungakhathaliseki ukuthi ixhunywe ISP yakho?
Windows 8 Build 8220 kungekho inkinobho Qala
Nakuba asinayo indlela eya ngokuzimela ukuqinisekisa ukuthi lokhu ngempela.
Kungenzeka yini ukuba ukuxhuma router ukuze Internet kwaba esibhedlela njengenjwayelo ngokusebenzisa VPN, kodwa ongajabulela Wai FEMA?